Inona no mitranga raha mihinana fromazy ianao alohan'ny hatoriana? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Sakafo fromazy alohan'ny hatory - valiny sy fanontaniana mahazatra
Sakafo fromazy alohan'ny hatory - valiny sy fanontaniana mahazatra
Inona no mitranga raha mihinana fromazy ianao alohan'ny hatoriana?
Maro ny bodybuilder no manirymihinana fromazy kely alohan'ny hatoriana. Izany dia mitarika famotsorana maharitra ny asidra amine ao anaty ra sy hozatra mandritra ny alina, izay mety hampihena ny fahasimban'ny hozatra.Fromazy Cottagedia feno proteinina kininina. Voasintona tsimoramora i Casein, mampiroborobo ny fahazoana hozatra ary manampy amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny hozatra.
Yo! Hey hey daholo. F'inona no mitranga! Shaun Hadsall eto. Manampahaizana matavy diehard 46 taona.
Tompon'ny vondrom-piarahamonina Fast Fat Lean amin'ny Internet mahazo tombam-bidy amin'ny faha-12 Ary amin'ny lahatsoratra anio dia ampahany 3 amin'ny fizarana telo momba ny fomba fananganana ny sakafo matavy indrindra, hampahafantariko tsara ny fomba fisakafoanana alohan'ny hatory ho an'ny famoizana tavy haingana. Marina izany. Nasaina tsy hihinan-kanina aho aorian'ny 6:00 na 7:00 maraina raha ny hampihena ny lanja no tanjona.
Ny siansa izao dia mampiseho fa angano io. Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hofoanako ilay angano momba ny andro rehefa misakafo maraina ianao na mampiasa fifadian-kanina tsy tapaka, ary ny fomba fisorohana ny sakafo mampitombo ny insuline toy ny gliosida vao maraina dia mamela ny vatana hamoaka neurotransmitter maro hafa izay mitazona anay hifantoka, hatanjaka ary hanampy antsika handoro bebe kokoa ny tavy ao amin'ny Fat miresaka momba ny antony tokony hihinanana gliosida betsaka indrindra amin'ny alina ao amin'ny lahatsoratra faha-2. Ary nanonona fikarohana fikarohana telo navoaka aho, izay mampiseho fa ny olona mihinana ny maro an'isa, ny ankamaroan'ny ny gliosida mandritra ny sakafo hariva dia nanana fahatsapana insuline tsara kokoa, very tavy kibo bebe kokoa, ary matory tsara kokoa noho ireo izay mihinana gliosida vao maraina.
Ka fantatro fa voalamina fandaharana daholo isika hino fa tokony hihinana ny gliosidratsika anio maraina ary hihena amin'ny alina rehefa mihena ny metabolisma. Saingy, angano izany. Ny fihinanana sakafo mety alohan'ny hatory dia handrisika ny metabolismanao.
Tsy lazaina intsony fa ny torimaso lalina dia hampitombo ny metabolismo rehefa manonofy ianao, manala ny angano fa hihena alohan'ny hatory ny metabolismao. Manoro hevitra anao aho izao mba handamina tsara an'ity sakafo ity alohan'ny hatory ianao ary avelao hanodidina azy 90 minitra ka hatramin'ny adiny roa alohan'ny hatory, andao lazaina hoe 6:00 hariva. matory ianao amin'ny 10:00 alina, miandry adiny efatra alohan'ny hatory ianao.
Mandry noana matory ianao izao. Tsy hatory tsara ianao. Hifoha noana ianao.
Ary hifoha amin'ny fiovaovan'ny siramamy amin'ny rà ianao. Raha manome sakafo ara-dalàna ny vatanao ianao izao, izay holazaiko anao ao anatin'ny iray segondra monja, adiny iray na roa alohan'ny hatory, dia hanana otrikaina ilaina hamelomana sy hamerenana indray ny vatanao izao. Manampy anao hiteraka torimaso lalina izany.
Izy io dia misoroka ny hanoanana maraina ary mampiorina ny siramamy ao anaty maraina. Mila maka antoka ianao fa misoroka ny sakafo misy gliosida avo alohan'ny hatory. Ny gliosida tokana atoroko hihinana adiny iray na roa alohan'ny hatory dia ny voaroy gliokemika ambany sy ny serizy.
Ary ny tianao hatao dia ny manambatra an'io miaraka amin'ny loharano proteinina avo lenta. Na inona na inona, te-hihinana proteinina ianao mandritra ny ora vitsivitsy alohan'ny hatory satria misy vokany mafana kokoa io. Rehefa mihinana proteinina alohan'ny hatory ianao dia mampitombo ny fatran'ny metabolisma ny vatanao amin'ny alàlan'ny fandevonana izany sakafo izany satria mila angovo betsaka kokoa handevona proteinina noho ny tavy na gliosida.
Te hampifangaro an'izany fotsiny ianao izao. Afaka manao tavy namana ianao. Ohatra, azonao atao ny manetsiketsika proteinina iray sotro dibera manta iray sotro.
Afaka nanao proteinina sy legioma ianao. Mety ho pi ianao. manao oh. trondro na amam-borona.
Azonao atao ny manendasa an'io, ary afaka manisy diloilo oliva eo amboniny ianao ary manary izay karazana legioma mena kely amin'ny hazofijaliana sy mena. Ankehitriny ny karazana proteinina tsara indrindra raisina alohan'ny bedis dia tena proteinina casein satria mamoaka miadana mandritra ny alina. Mandany ora maro ny mandevon-kanina.
Noho izany dia mamoaka tsimoramora asidra amine izy ary mamahana ny hozatrao hanampy anao hiala sasatra sy hatory tsara amin'ny alina, miaraka amin'ny hery proteinina marobe. Hita ihany koa ao anaty fromazy sy yaourt grika. Ka ny tsakitsaky alohan'ny hatory dia fromazy kely misy voaroy na serizy, na yaorta grika misy olana voaroy.
Raha tsy mahazaka ny vokatra vita amin'ny ronono ianao dia miverena amin'ireo loharanom-proteinina maivana kokoa. Mampiseho ny fikarohana fa raha te hihinana zavatra toy ny hena mena alohan'ny hatory ianao dia mety hampiakatra avo ny insuline anao. Aza adino fa manan-danja io alohan'ny hisakafoanana alohan'ny hatoriana.
Afaka mihinana ara-bakiteny 10 minitra alohan'ny hatory ianao raha manaraka ireo toro lalana ireo dia hahazo vokatra tsara. Tsy hahatonga anao hanana lanja mihitsy izany. Mila maka antoka fotsiny ianao fa misoroka ny sakafo misy fatran'ny insuline.
seza bisikileta ho an'ny vehivavy
Ka te hisoroka ny sakafo matotra ianao ary te-hitsipaka starch mandritra ny ora vitsivitsy alohan'ny hatory, ireo no sakafo mampitombo ny insuline ary mampitombo ny insuline. Ny insuline dia hormonina fitehirizana matavy ary manakana ny famoahana ireo hormonina mitombo rehefa matory ianao. Ataovy ao an-tsaina fa rehefa matory ianao, ny vatana dia mamoaka ny ankamaroan'ny hormonina mitombo mandritra ny alina, ary ny fihinanana sakafo manatsara ny insuline alohan'ny hatory dia hahatonga azy io ho maivana sy hanakana ny vatanao tsy hamoaka hormonina hitombo.
Alohan'ny hanasoniavako izany dia te hiresaka momba an'ity combo sakafo fitehirizana matavy ity tokony hohalavirinao ianao ary izany dia ny starch ao anaty tavy miaraka na voankazo masaka miaraka amin'ny siramamy sy tavy miaraka. Ary omeko ohatra salama ianao. Andao hatao hoe misafidy akondro masaka misy dibera manta manta ianao.
Toa matsiro tsara. Ary izy roa dia safidy ara-pahasalamana mahasalama. Fa ny akondro masaka dia be omena? siramamy betsaka kokoa noho ny akondro maitso.
Rehefa masaka ny akondro iray dia mivadika siramamy ny tanjaka fanoherana. Ka ny akondro masaka manana siramamy betsaka. Io siramamy io dia hampiakatra ny insuline.
Ny insuline dia hormonina mitahiry ny vatana. Ka raha ny dibera amandy dia ao anaty rafitra amin'ny fotoana mitovy indrindra amin'ity insuline ity, ity insuline ity dia handray sy hitahiry an'io tavy io. Ka io no combo sakafo fitehirizana matavy voalohany izay tianao hialana amin'ny 95% amin'ny fotoana.
Mety tsara aminao amin'ny Andro Fetsy, na raha misakafo misakafo ianao. Saingy azonao atao ny mieritreritra ny fitambaran'ny sakafo ankafizinay izay manana an'io fatin-tsakafo sy siramamy mahafaty io. Ice cream sy ny ankamaroan'ny sakafon-tsika ankafizinay indrindra, na sakafo haingana na lasagna, spaghetti, meksikana, sinoa.
Ireo sakafo rehetra ireo dia mampifangaro ny starch sy ny siramamy betsaka amin'ny tavy ary ity dia fitehirizana loza vaovao. Omeo sitraka lehibe aho. Kitiho ny bokotra Like.
Sh izao ve. Kitiho anarana namana izay mety hahazo tombony. Raha misy fanontanianao dia mametraha hevitra eto ambany, misaotra anao niambina ary manohy ny asa tsara.
Mandoro tavy ve ny fromazy kely alohan'ny hatoriana?
Afaka misakafotrano bongony fromazy alohan'ny hatorytena manampy anaoverylanja Ny fandinihana iray dia nampifandray sakafo maivana alinafromazy Cottagemiaraka amin'ny fanamafisana ny metabolisma. mihinanafromazy alohan'ny hatorymety tsy ho zavatra nofy ratsy intsony satria hitan'ny fanadihadiana vaovao fa ny fihinananatrano bongony fromazy teo alohamankany ianaotorimasoafaka manampy lanjavery.31 Okt 2018
Ohatrinona ny fromazy trano tokony hohaniko alohan'ny hatory?
Tamin'ny fandalinana ny taona 2018, ny mpikaroka dia manana vehivavy mavitrika 10 amin'ny faha-20 taonany mihinana na kapoaka iray azafromazy Cottage(miaraka amin'ny proteinina 30 grama sy tavy 0 isan-jato), proteinina kardin (30 grama), na placebo tsy kaloria amin'ny alina amin'ny fotoana telo misaraka manodidina ny 30 ka hatramin'ny 60 minitraalohan'ny hatory.1 Sep 2020
Afaka manampy anao hatory ve ny fromazy amin'ny trano bongony?
Yaorta grika misy kalsioma aryfromazy Cottage
Ny ronono dia loharano voajanaharytorimaso-mba mampiditra tryptophan, ary ny calcium dia miasa mampisondrotra an'io asidra amine io koa. Na dia tsy betsaka aza ny olona misotro ronono mafana iray vera alohan'ny hatory, dia mamporisika ny fanaovana 'fotoana tsindrin-tsakafo' misy ireo loharanon-dronono misy proteinina be ireo.19 Jona. 2018 Novambra
Mampihena ny tavy amin'ny kibo ve ny fromazy?
Mihinana betsaka amin'nyfromazy Cottagedia fomba tsara hanamafisana ny fihinanana proteinina. Tena mahavoky koa izy io, mahatonga anao hahatsapa ho feno kaloria kely. Ny vokatra vita amin'ny ronono koa dia be kalsioma, izay naseho fa manampy amin'nymatavy-fandoroana (25).1 Okt 2014
Inona no mitranga raha mihinana fromazy an-trano isan'andro ianao?
Ny voka-dratsy dia mety mihelina ihany, faraha ianaomandeha matetika amin'nyfromazy Cottagesakafo ary mihinana sodium be loatra, mety hisy olana lehibe, toy ny: tosidra ambony. fitomboan'ny risika amin'ny aretim-po sy tapaka lalan-dra. aretim-po.
Mandoro tavy amin'ny kibo ve ny fromazy?
Mihinana betsaka amin'nyfromazy Cottagedia fomba tsara hanamafisana ny fihinanana proteinina. Tena mahavoky koa izy io, mahatonga anao hahatsapa ho feno kaloria kely. Ny vokatra vita amin'ny ronono koa dia be kalsioma, izay naseho fa manampy amin'nymatavy-mirehitradingana (25).1 Okt 2014
Azoko atao ve ny mihinana fromazy isan'andro?
Fromazy Cottagedia loharanon-tsakafo misy vitamina sy mineraly sasany, saingy misy hafa kely fotsiny ao aminy, na tsy misy mihitsy. Raha ianao irerymihinana fromazymandritra ny andro dia tsy hahazo ny RDI amin'ny otrikaina rehetra ilain'ny vatanao hiasa tsara ianao. Mety ho very angovo ianao mandritra ny andro, indrindra raha manao fanatanjahan-tena.
Afaka mihinana lanja fromazy ve ianao?
Irayamin'ireo tsara indrindra diafromazy Cottage- kaloria ho an'ny kaloria, izy io dia proteinina kely fotsiny miaraka amin'ny gliosida kely arymatavy.mihinanafenofromazy Cottagedia fomba tsara hanamafisana ny fihinanana proteinina. Tena mahavoky koa, mamoronaianareomahatsapa ho feno kaloria kely.1 Okt 2014
kiraro bisikileta lehilahy
Iza no yaourt na fromazy mahasalama mahasalama kokoa?
Ny fijerena akaiky ireo fironana ara-pahasalamana ireo dia nanambara valiny nahagaga: 100-matavy matavy fenofromazy Cottagemisy proteinina 11,5 grama sy tavy 4.3 grama. Ny habetsahan'ny grika feno tavyyaourtmanana proteinina 8,7 grama ary matavy (4,1 grama).12 apr 2019
Tsara ve ny mihinana fromazy an-trano alohan'ny hatoriana?
Ny mpikaroka avy ao amin'ny Florida State University dia nilaza fa ny fihinanana an'ity snack feno proteinina ity alohan'ny hatory dia misy tombony lehibe. Hitan'izy ireo fa ny fihinanana kely fromazy 30 na 60 minitra alohan'ny hatory dia mampiakatra ny tahan'ny metabolika ary manatsara ny fanarenana ny hozatra (hody toy ny ahoana ny hozatra aorian'ny fiofanana).
Inona avy ireo soa azo avy amin'ny fihinana fromazy?
Fisondrotana hozatra mitombo. Ny fromazy pondok dia manan-karena proteinina, izay manome asidra amine izay ampiasain'ny vatanao hananganana hozatra sy hozatra hafa. Ny cheese fromazy dia mety ho tsara kokoa noho ny loharanom-proteinina hafa, satria ireo vehivavy tao amin'ilay fanadihadiana navoaka tao amin'ny 'The Journal of Nutrition' dia nahazo tombony bebe kokoa tamin'ny proteinina vita amin'ny ronono.
Inona no fomba tsara indrindra anaovana fromazy?
Na miverena amin'ny taona 1950 ary asao ny fromazy an-tranonao ao anaty loaky ny poara voatavo na eo am-pandriana paiso voapaika. Ny tantely dia manome mamy fromazy amin'ny trano bongony, toy ny siropakitra. Manampia sombin-kanelina hanoraka ny tsiro.